Iziko leeApartments kwiSimbo III.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEvžen&Zuzana
Le ndlu ibekwe ecaleni kwesango lembali kwidolophu endala. Iimitha ezili-100 ukusuka kwindawo oya kufumana iCathedral yaseSaint Wenceslas edumileyo eyabekwa ilitye lembombo ngo-1104 AC. Uyilo lwangoku lwangaphakathi oluncinci lwendlu luhambelana nembali ende yesakhiwo, esakhiwa ekupheleni kwenkulungwane ye-19 yintsapho yamaJuda.
Indlu yakhiwa ngokutsha ngononophelo ngokwembono yomyili. Imigangatho emidala yeparquet yalungiswa, iindonga ezidala zezitena zavezwa kwanolwahlulo lwangaphambili (Art Nouveau) isilingi yafunyanwa kwaye yabuyiselwa. Zonke ezi zinto zidityaniswe noyilo oluphucukileyo, imbali kunye "ne-genius loci" inika amava awodwa.
Indlu ibekwe kumgangatho woku-1 wesakhiwo esiyimbali kwaye ijolise kwiyadi ezolileyo emva kwendlu. Umoya oyingqayizivele wegalari wenziwa ngodonga lwezitena oluhlanganiswe neefoto ezimnyama nezimhlophe. Igumbi elikhulu libandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nefriji, ifriji, i-microwave, i-oven, umpheki kunye neketile (i-snack elula ifakiwe), itafile yokutyela enezitulo ezine kunye ne-Smart TV. Udonga lwahlula ibhedi yobukhulu bokumkani ukusuka kwelinye igumbi. Igumbi lokuhlambela libandakanya ishawa, isinki, indawo yokufudumeza ephantsi kunye nendlu yangasese. Ungawushiya umthwalo wakho kwigumbi elivulekileyo lodaka. I-balcony encinci enombono weyadi yinxalenye yendlu.
Njengoko unokubona kwiifoto, indawo eyimfuneko yomoya wendalo yenziwa kukukhanya okucokisekileyo okudlala umdlalo wezithunzi ezinodonga lwezitena olungaphezulu kwekhulu leminyaka ubudala.
Ungasebenzisa umatshini wokuhlamba - umatshini kunye nesomisi emva kwesicelo sakho sangaphambili.
AKUKHO ilifti, kodwa ndiza kukunceda ngomthwalo wakho :)
4.95 ·Izimvo eziyi-94
Umbuki zindwendwe ngu- Evžen&Zuzana
Ngelixa sikubamba, sihlala sifumaneka kwiselfowuni.